တိုင်းသူ ပြည်သူများ အားလုံးကို ကဆုန် လပြည့် နေ့မှာ ညောင်ရေ သွန်းပြီမေတ္တာပို့ ဆု တောင်းပေးနေတဲ့ ဘေဘီမောင်…. – Shwe Naung
တိုင်းသူ ပြည်သူများ အားလုံးကို ကဆုန် လပြည့် နေ့မှာ ညောင်ရေ သွန်းပြီမေတ္တာပို့ ဆု တောင်းပေးနေတဲ့ ဘေဘီမောင်….
သရုပ်ဆောင် မင်းသမီး ဘေဘီမောင် ကတော့ ဗီဒီယို ဇာတ်ကားနဲ့ ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကား ကြီးတွေမှာ ပါဝင်ရိုက် ကူးထားကာ အောင်မြင်မှုတွေများစွာကို ရရှိ ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ သူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပရိသတ်တွေ အခိုင်အမာနဲ့ အနုပညာလမ်း ကြောင်းပေါ် လျှောက်လှမ်းနေတဲ့ သူမက ပွင့်ပွင့် လင်းလင်း ပြောဆိုနေ ထိုင်တတ်သလို လက်ရှိ အခြေအနေတွေမှာ ဆိုရင်လည်း ပြည်သူတွေနဲ့ တစ်သွေးတည်း တစ်သားတည်း ရပ်တည် နေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဘေဘီမောင်က အခုလို ကာလမှာ အဆင်မပြေ ကြတဲ့ သူတွေကို တတ်နိုင် သလောက် လိုက်လံလှူ ဒါန်းမှုတွေ ပြုလုပ် နေတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ အေးချမ်းတဲ့ ဘုရားရိပ်ကို ခိုလှုံကာ တရားစခန်းဝင် ရောက်ရင်း ကောင်းမှု ကုသိုလ်တွေ ပြုလုပ်နေတာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။
မကြာသေးခင် အချိန် ကတော့ သူမရဲ့ လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာ ထက်တွင် ယနေ့ ကဆုန် လပြည့်နေ့မှာ ညောင်ရေသွန်းရင်း မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားတွေ အားလုံးကို မေတ္တာပို့ ဆုဆောင်းပေးနေတာ ကို ဖော်ပြ ပေးလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
“မင်္ဂလာ နံနက်ခင်းပါ ယနေ့ ကဆုန်လပြည့် ဗုဒ္ဓ နေ့က စပြီး တိုင်းသူပြည်သား အားလုံး ယနေ့လပြည့်ညမှာသာတဲ့..လမင်းကြီးလို ပြည့်ဝကြပါစေ အေးချမ်းကြပါစေ အပြစ် ကင်းကြပါစေ..
လိုအင်ဆန္ဒမှန်သမျှ ပြည့်ဝကြပါစေ..မြန်မာတစ်ပြည်လုံး ငြိမ်းချမ်း သာယာရှိ ကြပါစေလို့မေတ္တာပို့ ဆုတောင်း ပေးပါတယ်….”ဆိုပြီး အေးချမ်းလှတဲ့ ပုံရိပ်တွေနဲ့ အတူ ပရိသတ်တွေ အတွက် မျှဝေပေး လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။သူမကို ချစ်တဲ့ သူတွေ ကလည်း အမြဲကျက်သရေရှိ အေးချမ်းပြီး အရမ်းချစ်ဖို့ ကောင်းနေတာပဲလို့ ပြောထား ကြတာလည်း တွေ့ရပါတယ်။
Photo Credit-Baby Maung FB Account
ထပ်ခါခါ ပြန်ကြည့်ချင်လောက်အောင် အနက်ရောင် ဖက်ရှင်လေးနဲ့ ဆက်ဆီကျကျ မိမိုက်နေတဲ့ မော်ဒယ်လ် ဖြူသိင်္ဂကျော်ရဲ့ အလန်းစား ပုံရိပ်လေးများ……….
အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ် ကောက်ကြောင်း အလှ ကို ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ မော်ဒယ်လ် ရှင်ယွန်းမြတ်…
ဆက်ဆီကျကျ ကိုယ်လုံးလေးနဲ့ အမိုက်စား ပိုစ့်တွေ ပေးနေတဲ့ မော်ဒယ်လ် ခက်ဝေမိုးသူရဲ့ အလန်းစား ပုံရိပ်လေးများ………
အမိုက်စား ကောက်ကြောင်းလေးနဲ့ ဖူးပွင့်သခင်ရဲ့ ချစ်စရာ ပုံရိပ်လေးများ…..